Ziyanda izinsolo ngenkohlakalo ekuhlinzekweni kwamanzi – Bayede News
Ziyanda izinsolo ngenkohlakalo ekuhlinzekweni kwamanzi
NgokoMthethosisekelo wezwe, ukuhlinzekwa ngamanzi kulilungelo elimqoka. Nokho leli lungelo kweminye imiphakathi ikakhulukazi leyo esezindaweni zakobantu oningi layo kungaboHlanga leli lungelo liyinganekwane nje.
by nguMandla Zulu Posted on 10 January 2020 12 January 2020
NgokoMthethosisekelo wezwe, ukuhlinzekwa ngamanzi kulilungelo elimqoka. Nokho leli lungelo kweminye imiphakathi ikakhulukazi leyo esezindaweni zakobantu oningi layo kungaboHlanga leli lungelo liyinganekwane nje. Kuthi nalapho uHulumeni ehlinzeka khona imiphakathi bese umphakathi udlale izinkampani ezisuke ziqashelwe ukusabalalisa amanzi endaweni.
Isililo ngalokhu siyezwakala kweminye imiphakathi eyakhele isifundazwe iKwaZulu-Natal. Kweminye ekhulume nelaboHlanga imilomo iyavunana ekutheni ngenxa yesimo sabo baxhashazwa yinkampani thizeni (igama layo esinalo) esiyazixebulela umkhoma lapha kuMasipala weTheku kanye nowaseNdwedwe ngaphansi koMasipala omkhulu iLembe. Uma amalungu omphakathi eyizeka indaba athi inkampani lena ibahlinzeka ngamanzi nje kade yaqala inkulumo yengqalasizinda enjengompompi okuthiwa izokwakhiwa. Abanye bathi ikhona ingqalasizinda ngamanzi angekho njengoba enye isiyaze yathomba nje ngakho belu ukungasebenzi ngenxa yokungabi bikho kwamanzi.
Kule miphakathi kuze kube nokudlinza ekuthenini le nkampani ibizwa ngabathile ngaphakathi komasipala nakubo ubuholi lobu bepolitiki. Ithi ingabizwa igixatshezwe ngemali bese yaba amavenge ukuze isikhathi sokusebenza seluleke. Okubi kakhulu nokuvezwa ngamalungu omphakathi wukuthi kuthi noma le nkampani isinikezwe ithenda leyo ingawahambisi amanzi kuzo zonke izindawo.
Usizi olukhulu lapha wukuthi enethunga isengela phansi ngoba eminye yale miphakathi okuthiwa intula amanzi izungezwe ngamathantala amadamu. Usizi luyabikwa eBothas Hill, KwaNyuswa, KwaSondela, eMnamatha, eNtuthuko naseMabedlane.
Abaholi bekomiti lomphakathi wasesigodini sakwaNyuswa esibizwa ngeKwaMlambo nakhona awabonwa amanzi, okunguNks uBuyi Dladla noMnu uLawrence Maphumulo bathi nabo basola unyawo lwemfene ngokuvalwa kwamanzi endaweni yabo ngoba ayatholakala kwezinye izindawo abakhelene nazo.
“Kuyacaca ukuthi sivalelwa ngamasibomu amanzi endaweni yethu ngoba emzini wekhansela uMnu uMhluhlumbe Mkhize kanye nasemzini kaMnu uVimbela Dladla ongusihlalo weWard Committee abaseduze kwethu kanye nasesikoleni uMphumela Combine Primary School okuysikole esingaphesheya kwethu ayatholakala amanzi khona. Uma sibuza kuziphathimandla nasekhanseleni sitshelwa ukuthi inkinga yingoba amapayipi mancane nokuthi injini yamanzi ayinawo amandla anele okududulela amanzi emizini yethu,” kusho uMaphumulo.
UNks uDladla yena uthi nale nkampani ehlinzeka ngamanzi ibahlinzeka ngamanzi angahlanzekile agcwele izibhidi nokuthi ngelinye ilanga kuwona la manzi kwaphuma izinwele.
“Uma sikhala elungwini lekomiti yewadi uMnu uDladla uvele asibhokele ngolaka athi asiwaphuze enjalo noma siwayeke uma singawafuni. Le nkinga yamanzi selokhu saba nayo kusukela ngowezi-2014. Sesingqongqoze eminyangweni eminingi sicela usizo kodwa singalutholi. Sesibhalele neHhovisi loMvikelo WoMphakathi kanye neHhovisi leKhomishini Yamalungelo Abantu ukuba basiphenyele ngembangela yokuvalelwa amanzi ekubeni ekhona kwenzinye izindawo esakhelene nazo.”
“Kumanje imizi yonke KwaNyuswa ifakelwa ojojo okukhomba ngokusobala ukuthi nakuzona lezi zindawo abekade etholakala kuzona asezovalwa ukuze kudle le nkampani esisola ukuthi ihlangene nosopolitiki namakhansela athile. Singumphakathi wakwaNyuswa kumele sisukume sonke silwe nalenkohlakalo eyenziwayo,” kuqhuba uNks uDladla.
Umkhuba okuthiwa sewandile kuthiwa amanzi avaleke nje esikhaleni okuyothi kungaba njalo bese ivela le nkampani njengomalamulela isiqhamuka namathange. ENdwedwe nje bakhala esifanayo baze basho nokuthi inkampani ayimiswe ngoba kunezinsolo zokuthi ingumagaya azidlele futhi idala inkinga bese iveza isixazululo mbumbulu.
Okhulumela ikomiti lomphathi, iNdwedwe Crisis Committee, uMnu uBheki Ngcobo ukuqinisekisile ukuthi abawasayidingi le nkampani ebahlinzeka ngamanzi endaweni. Ekhuluma nelaboHlanga uthi osekuphinde kwathela amafutha emlilweni yimihlola athi bayenziwe yisikhulu sikaMasipala obekuhlelwe ukuba kuhlanganwe naso ukuze kubhungwe ngalolu daba. Isikhulu lesi usigagule njengoMavundla oyimenenja ebhekelele amanzi eNdwedwe.
“Sivele sonke saqonda kuMasipala iNdwedwe sayomisa yonke into engena nephuma eNdwedwe. Sivale kusukela ngezikhathi zelesi-9:30 kuya kwele-14:30. Bekunganyakazi lutho ngoba sifuna ngodli uMnu uMavundla obeseshaye utshani wabaleka. Isimo ebesesibonakala siphuma esandleni sidambiswe ukufika komphathi wakhe uMavundla okunguMnu u-Elias Bhengu. UMnu uBhengu simtshele emehlweni ukuthi naye akasabuyeli emuva engasisizile,” kuqhuba uNgcobo.
UBhengu ube esebiza opulamba bakhe ngenhlso yokuba kuyobhekwa amavalvu asendaweni ekuP 100 abevaliwe ngenhloso yokuyowavula. Uthi kuthe sebewavulile opulamba base bethembisa umphakathi ukuthi bazoshintsha namapayipi amanzi atholakala ukuthi anenkinga.
“Sibe sesibeka nazi izimfuno zethu ezilandelayo kuBhengu: Sithe sicela kususwe uMavundla eNdwedwe ngoba asisamdingi ngoba sesikhathele ngamanga akhe. Sicele ukuba zesulelwe zonke izikweletu zamanzi ngoba sinenkolelo yokuthi kuqolwa umphakathi ngoba ngisho amanzi izincwadi zezikweletu zawo zifika njalo ngenyanga okusho ukuthi ngisho engekho iwashi liyaqhubeka nokubala. Kwesinye isikhathi ngisho efike isonto elilodwa noma amabili lona liyaqhubeka libalele inyanga. Siphinde sathi asisawadingi amathilagi asithuthela amanzi ngoba yiwona abanga izinkinga zamanzi zingaxazululeki,” kusho uNgcobo.
Uqhube wathi: “Okunye okwenze sathatha isinqumo sokuxosha amathilagi asihlinzeka ngamanzi ukuthi ukuthola ukuthi iningi imali echithwa nguMasipala kukhokhelwa le nkampani esithuthela amanzi njengoba kuvela ukuthi njengoba eli-16 amathilagi amanzi asebenza eNdwedwe abanikazi benkampani baxebula imali eyisigidi samarandi ngenyanga. UMasipala uphinde futhi ukhokhele uMngeni Water izigidi eziyili-R13 ngenyanga. Okusho ukuthi sonke isabelomali sikaMasipala weLembe kubandakanya nesigidi esikhishwa nguMasipala iNdwedwe ingaphezulu kwezigidi ezili-R17 imali ekhokhwayo okungabe imali esentshenziselwa ukulungisa ingqalasizinda.”
UMapholoba uliphimse lama elokuthi, “Iyadliwa imali eNdwedwe ngamanzi kodwa thina mphakathi waboHlanga asiwatholi.”
UNgcobo ugxeke iziphathimandla zikaMasipala okubalwa kozona iMeya, uSomlomo nekhansela lendawo ngokuthi abanendaba nokulandela izinto ezikhalisa umphakathi abathi abawuholayo.
UMaphumulo uthi isizathu esenza amanzi engavalwa esikoleni iMphumela Combine Primary School ngukuthi lokho kungadonsa amehlo omphakathi ebese uyabanjwa lo mkhonyovu owenziwayo futhi kugcine kususe nomsindo ngoba kungasho ukuphazamiseka kokufunda kwezingane. Uphethe ngokuthi kwesinye isikhathi uma beyokhala ekhanseleni livele libafundekele ngeqembu lalo lezepolitiki lithi abantu kumele kuqala bajoyine lona ukuze bezothola amanzi.